Siddeed qof oo ku dhimatay dagaal Gaalkacyo - BBC Somali
Siddeed qof oo ku dhimatay dagaal Gaalkacyo
Xaaladda nabadgelyo ee gobolka Mudug ayaa ka sii daraysa taas soo ka dhalatay colaado soo noqnoqday oo halkaas ka taagan tan iyo billowgii bishan aynu ku jirno.
Colaaddani waxay u dhaxeeysaa beelaha koofurta iyo kuwa waqooyiga magaalada Galkacyo ku dhaqan. Arrintu waxay sii cakirantay ka dib markii shalay gelinkii dambe 8 qof lagu dilay dagaallo ka dhacay miyiga ku aaddan bariga Galkacyo.
Inkasta oo colaaddu ay ka billaabatay welina ka taagan tahay miyiga magaalada Galkacyo, haddana waxay u muuqataa in arrintaasi ay si wayn u saamaysay loogana dareemay magaalada Galkacyo gudaheeda.
Dadka ku sugan magaalada Galkacyo qaarkood oo BBCda u warramay ayaa sheegay, in xalay iyo maanta labada dhinac ee Galkacyo si wayn looga dareemay saamaynta dagaallada ka socda bariga magaalada oo shalay gelinkii dambe ay ku dagaallameen malleeshiyo ka soo jeedda koofurta iyo waqooyiga Galkacyo.
Inta la ogyahay waxaa dagaalkaas ku dhintay 8 qof waxana dhaawac ka soo gaaray 16 qof oo kale, kuwaas oo dhammaantood ka soo jeeda kooxihii dagaalku dhexmaray. Wararku waxay kaloo sheegayaan in baabuur la kala qabsaday kuwo kalana la gubay.
Laba isbitaal oo koofurta iyo waqooyiga magaalada Galkacyo ku yaalla ayaa la sheegayaa in la geeyay dhaawacyo ay waxyeello ka soo gaaray dagaalkii shalay gelinkii dambe ka dhacay meel magaalada Galkacyo 120km xagga bari ka xigta.
Colaaddani waxay markii hore ka billaabatay welina ay salka ku haysaa muran la xiriira dhinaca daaqsiinta iyo biyaha, taas oo markii dambe isu rogtay dagaallo goos-goos ah oo dhowr jeer ka dhacay miyiga magaalada Galkacyo.
Dad xogogaal ahi waxay sheegayaan in malleeshiyada colaaddu u dhaxayso ay isku horfadhiyaan afar goobood oo magaalada ka baxsan, kuwaas oo kala ah Dameeralay, Carradhaban, Godod, Doho kuwaas oo ku fadhiya dhul gaaraya 120km oo bariga iyo koofur bari magaalada kaga beegan.
Ilaa iyo hadda lama sheegin qaylo-dhaan nabadeed oo ka soo yeertay madaxda beelaha ama odayaasha gobolka, sidoo kalana labada maamul ee Puntland iyo maamulka koofurta Galkacyo ayaan iyaguna wax war ah ka soo saarin colaadda xilligan gobolka ka aloosan.
Waxase jirta baaqyo nabadeed oo ka imanaya dhallinyarada gobolka sida uu BBCda u sheegay Cabdinaasir Beddel Khalaf, oo isagu ka mid ah madaxda ururka dhallinyarada gobolka Mudug oo inta badan u ololeeya dhinaca nabadda.
Dagaalladan oo gobolka ka curtay billowga bishan November ee aynu ku jirno marka la isu geeyo dadkii ku dhintay ilaa iyo maanta waxay ka badan yihiin 20 qof, tiro intaas ka badana waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan.
Dhinaca kalana colaadda haatan taagani waxay ku soo beegantay iyadoo ay gobolka ka socdeen wada-hadallo u dhexeeyay waxgaradka iyo siyaasiyiinta koofurta iyo waqooyiga, kuwaas oo looga gol lahaa in gobolka lagu nabadeeyo waxana magdhow laga bixiyay dadkii ku dhintay billowgii colaadaha.
Hase ahaatee tallaabadaasi ma noqon mid sii socota, ka dib markii ay soo dhexgaleen dagaallo kale oo kuwaas lagu eedeeyay inay ka dambeeyaan kooxo markii horeba ka horjeeday nabadda iyo wada-xaajoodka ay wadeen waxgaradka labada dhinac, sida ay sheegeen masuuliyiinta gobolka Mudug qaarkood.
Si kastaba ha noqotee, dadka gobolku waxay tilmaamayaan inay gobolka ay ka muuqdaan astaamo colaadeed kuwaas oo culays xoog leh ku haya nabadda gobolkaas, haddii aan dhaqso xakamayna sababi karta in colaaddu ay ku baahdo dhul ka ballaaran inta ay hadda ka aloosan tahay.